PressReader - Ilanga: 2018-02-12 - 4. USHUKELA
Abacwaningi sebathola ukuthi inyama ingenye yezinhlobo zokudla ezaziwayo ukuthi yandisa ingcuphe yokungenwa yisifo sikashukela.
Ucwaningo olwenziwe yiHarvard School of Public Health e-United States of America (USA) luveze ukuthi ngisho nokuyidla kancane inyama ebomvu, kumbe imikhiqizo yayo, kuyenyusa E-University of Adelaide e-Australia isitshudeni ebesenza iziqu zobudokotela sithole ukuthi inyama inomthelela emhlabeni jikelele wokuzimuka ngokweqile ngokulinganayo noshukela.
Ucwaningo luveza ukuthi izakhamzimba ama- protein ezitholakala enyameni, zigayeka kamuva kunama- carbohydrate, okwenza amandla esiwathola kuma- protein abe yinani elengeziwe. Lelo nani umzimba uyaliguqula ulibeke njengamafutha asemzimbeni.
Lokhu kunomthelela wokuzimuka ngokweqile olinganiselwa e-13%. Uhlobo lwe- cholesterol oluyingozi lubangela ukucinana kwemithambo yegazi nesifo senhliziyo. Njengoba lolu hlobo lutholakala ekudleni okunenyama, kusobala ukuthi odla okumilayo kodwa ikude naye ingozi yala mafutha.
ISITHOMBE NGABE: BLAVITY.NETDNA UMTHOMBO NGABE: MERCYFORANIMALS.ORG
KUYANCONYWA ukudla okutshalwayo uma ufuna ukuphila kahle.